समाजसेवी माया गायिका सम्म ! | Samacharpati.com – A Complete News Portal From Pokhara Nepal
समाजसेवी माया गायिका सम्म !
प्रकाशित मिति: 2074 श्रावण4बुधबार(July 19, 2017) 9:23 AM बजे Posted By: Samachar Pati
– मीना थापामगर, पोखरा
पोखराकी गायिका माया पुनमगरले भर्खरै मात्र ‘पोखरेली सोल्टिनी’ गीत बजारमा ल्याएकी छिन् । यतिखेर उनलाई गायिकाको रुपमा चिन्ने गरेपनि उनी विगत एक दशकदेखि समाजसेवामा लाग्दै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक हित र उनीहरुमा चेतना अभिवृद्ध गर्दै दीन दुखीहरुको सेवामा आफ्नो अमूल्य समय बिताएकी छिन् ।
बाबा गनबहादुर पुन र आमा प्रितीमाया पुनको जेठी छोरीको रुपमा म्याग्दी खिवाङमा जन्मिएकी माया हाल परिवारको साथमा पोखरालेखनाथ महानगरपालिका लामाचौरमा बस्दै आएकी छिन् । बाबा इन्डियन आर्मी भएकाले उनको बाल्यकाल इण्डियामा बितेपनि अन्तत नेपाल आएपछि समाजसेवामा समर्पित भइन् । १५ वर्ष सम्म इण्डियामा बिताएकी मायाले नेपाल आएपछि विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध रहेर विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, दलित र उत्पिडित समुदायको हितको लागि अनवरत लागिरहिन् ।
शुरुमा आशको साथी नामक सस्थामा आबद्ध रहेर काम गरेकी माया कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप, फ्यामली प्लानिङ हुँदै क्ष्लतभचलबतष्यल थ्यगत ल्भतधयचप ब्अतष्खष्कतब मा आबद्ध भएर समाजकै लागि लागिपरिन् । एचआइभि पोजेटिभ भएका व्यक्तिहरुलाई समाजले हेर्ने जुन नकरात्मक दृष्टिकोण छ, त्यस्ता समाजलाई सचेत गराउँदै उनीहरुको लागि केही गर्न पाउँदा उनी गर्वानुभूति गछिन् । त्यस्तै क्ष्लतभचलबतष्यल थ्यगत ल्भतधयचप ब्अतष्खष्कतब मा आबद्ध रहँदा उनी आफ्नै पहलमा कास्कीको कालिका गाविसका दलित बस्तीमा ३०० वटा फोहोर पाल्ने टिन उपलब्ध गराइन् । उनी भन्छिन् ः “त्यसको लागि म एक्लैले हातमा फोरा उठिन्जेल टिनको बाकस बनाएँ, टिन ठटाएँ, अहिले सम्झिदा नि म एक्लैले कसरी सकेँ होला भन्ने लाग्छ । तर म आफूले जति दुःख भोग्नु परेपनि समाजको लागि केही दिन पाउँदा खुसी छु ।”
फरक उद्देश्य पृथक कार्ययोजना बनाएर समाजलाई सुसूचित गर्न माहिर छिन् माया । संविधान सभामा युवाहरुको सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै युवाहरुलाई संविधानप्रति सचेत गराइन् उनले । साथै सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरोस् भन्ने अभिप्रायले चिप्लेढुङ्गादेखि पृथ्वीचोकसम्म ट्याक्सी बाइक पुछ्ने कार्य पनि गरिन् । उनी भाषणले होइन व्यवहारिक रुपमा काम गरेर देखाउन चाहन्छिन् । उनी भन्छिन् ः “हाम्रो देशमा भाषण गर्नेहरुको जमातले गर्दा नै देश विकास हुन सकेन, देशको समुन्नत विकासको लागि भाषण होइन व्याहरमा उतार्न जरुरी छ ।” पृथक ढङ्गले समाजलाई सुसूचित गर्ने र युवाहरुलाई प्रेरण दिने खालका कार्यहरुले गर्दा उनी सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहेका युवाहरुको ढुकढुकी बन्न सफल भएकी छिन् । सगँगसँगै उनी गायन क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरिन् । उनले पहिलो गीत “म सँग नेपाली मन छ” गीत गाएर आफू राष्ट्रभक्ति भएको कुरा प्रष्ट्याइन् । गीत संगीतको माध्यमबाट होस् या समाज सेवामा लागेर होस् उनी राष्ट्र र उत्पीडित जनताका लागि समर्पित हुँदाहुँदै अचानक ब्रेन ट्युमर जस्तो प्राणघातक रोगको शिकार बन्न पुगिन् ।
जीवन मरणको दोसाधमा हुँदा पनि आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य पुरा गरिरहिन् । उनले अपरेशन अघि आफ्नो दोस्रो कोसेली ‘आज तिमीलाई’ भन्ने गीत बजारमा ल्याइन् । उनी भावुक हुँदै भनिन् ः “यदि म मरेर गएपनि यो गीत आम दर्शक, शुभचिन्तकको मनमा बजिराहोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो गीत अपरेशन अघि रेकर्ड गरेको हुँ ।” आफू रोगले ग्रस्त हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कन्र्सट, महोत्सवहरुमा प्रस्तुत भएर आम स्रोता शुभचिन्तकहरुलाई सधैं खुसी दिइरहिन्, युवाहरुलाई हौसला र प्रेरणा दिइरहिन् । “म आफू भित्र दुखेर पनि अरुलाई हाँसो दिन चाहन्थे, त्यसैले मेरा शुभचिन्तकहरुको माया हौलसा पनि मैले पाउँथे, म त्यसैमा खुसी हुन्थेँ । त्यो बेला लाग्थ्यो मलाई केही भएको छैन, म एकदम ठिक छु, तर म एक्लो हुँदा आफ्नो पीडा सम्झेर रुन्थे । त्यो बेला मेरो पर्दा अगाडि र पर्दा पछाडिको दुईटा जीवन थियो । आम दर्शक शुभचिन्तकहरुले देख्ने एउटा जीवन थियो भने म भित्र मेरो पीडा र दुखाईको अर्को जीवन थियो” उनले आफ्नो भावुकता पोखिन् । समाजसेवा र गीतसंगीतमा आफ्नो जीवन सुम्पेकी मायाले ब्रेन ट्युमरको अप्रेशन गर्ने बेलामा आफ्नो जीवन भगवनलाई सुम्पिन पुगिन् । उनी भन्छिन् “भगवानको साथमा र शुभचिन्तकहरुको कामनाले गर्दा मेरो अपरेसन सफल भएको छ” ।
उनको सफल उपचारपछि नयाँ जीवनको साथमा ‘आज तिमीलाई’ भन्ने गीतको म्युजिक भिडियो समेत दर्शक माझ ल्याइन् । उनी भन्छिन् ‘अब जीवनले साथ दिएको छ, अब सधै गीत संगीतमार्फत् आम दर्शकहरुको मन र ढुकढुकीमा रही फरक फरक कोसेली ल्याउने छु ।’ ‘मेरो यो दोस्रो जीवन प्राप्त भएको छ, अबको यो जीवनमा गीतसंगीतको मध्यमले म सबैको मनमा बस्न चाहन्छु । यसको लागि सबै दर्शकहरुका माया साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि राखेको छु ।”
नयाँ जीवन पछि उनी आफै पनि हौसिएकी छिन् । उनको तेस्रो गीत ‘पोखरेली सोल्टिनी’ को म्यूजिक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । फलानो क्रियसनले निर्माण गरेको भिडियोको यही असार १३ गते एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो । म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा गायक कर्णदास, विनोद वानिया, रामभक्त जोजिजू, लगायत स्थानीय कलाकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । माया पुनको स्वर रहेको गीतमा शब्द÷संगीत बसन्त सापकोटाको रहेको छ । अपिल त्रिपाठीले निर्देशन तथा सम्पादन गरेको गीतको संगीत संयोजन सुदिप सागरले गरेका हुन् । रोहन नेपालीले कोरियोग्राफी गरेको गीतको छायांकन सरोज अधिकारीले गरेका हुन् । गीतको मेकअप आशिष गुरुङ्ग रहेका छन् ।
गायिका माया पुनले तेस्रो गीत दर्शकमाझ ल्याउँदा सम्म धेरैको साथ, सहयोग र हौसला मिलेको बताउँदै आगामी दिनमा यस्तै साथ सहयोग र हौसलाको अपेक्षा गरिन् । पृथक स्वर र उत्कृष्ठ कला भएकी गायिका मायाले छोटो समयमा नै लाखौ दर्शक स्रोता एवं शुभचिन्तकहरुको साथ र हौसला पाएकी छिन् ।